Izindlu e- Coatepeque Lake Island - I-Airbnb
Izindlu e- Coatepeque Lake Island
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Douglas
Indawo enhle yabahambi, abangani nemindeni! Iphuli, i-jacuzzi, idokhi, ikhishi eligcwele nezinye izinsiza!
Izindawo ezikhululekile, ukubukwa okumangalisayo. Itholakala esiqhingini esisodwa e-Coatepeque. Isikebhe sizokuthutha sikuyise esiqhingini imizuzu emi-3, ukugibela imali engu-$10 ukuya nokubuya ngeqembu ngalinye, nganoma yisiphi isikhathi osifunayo. Ukupaka ngasohlangothini lomfula, imali engu-$15 ubusuku ngabunye kuzo zonke izimoto zakho. Uma ungazithandi izikebhe namanzi ungabhuki. Awekho amaqembu avunyelwe / AKUKHO IZIPHUMA / Ukuphepha 24/7 SICELA UBUZE IZIMALI EZIngeziwe NGAPHAMBI KOKUBHEKELWA
I-Coatepeque Lake yazalwa cishe eminyakeni engu-60,000 edlule ngemva kokuqhuma kwentaba-mlilo enkulu, okulenza laba indawo eyingqayizivele nenhle emhlabeni.
Indlu yethu isogwini lwaleli chibi elihle futhi ingahlalisa abantu abangafika kwabayi-12, ilungele imindeni noma amaqembu abangani.
Ikhishi elihlome ngokugcwele elinesitofu, ihhavini le-microwave, isiqandisi, umshini wekhofi, izinto zikagesi, izitsha, izitsha, izinkomishi nezinto zokusika okulungele ukuzisebenzisa. Ukuze kuphekwe ngaphandle, kukhona ithala lezoso kanye namathuluzi ayo.
Ukushona kwelanga okuhle noma ubusuku obugcwele izinkanyezi.
Unyaka wonke ungakwazi ukubhukuda kuwo futhi uzijwayeze imisebenzi eminingi yamanzi efana ne-kayaking, ukushisa ilanga, ukuhamba ngomkhumbi ....
4.63 · 163 okushiwo abanye
Hlola ezinye izinketho ezise- Lago de Coatepeque namaphethelo